Iyo yekutamba yevhidhiyo mutambo wepuratifomu "Google Stadia" yakatotanga kuvhurwa | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro zvakaziviswa iyo yakareba yakamirirwa Google Stadia kuvhurwa, iyo inouya ingangoita mwedzi misere zvaziviswa kumusangano weGDC wegore rino. Google pakupedzisira inopa yekutanga vhezheni yeStadia, asi ichave beta vhezheni. Iyi beta vhezheni yebasa mitambo yegore kubva kuGoogle inowanikwa kwePC, TV uye zvekare neyema smartphones. Zviratidzo zvekutanga zvakaburitswa Muvhuro uno zvinoratidza kuti tingadai tichiri kure nechimurenga chakaziviswa neGoogle.
Google Stadia ndiyo kambani nyowani yegore yemitambo sevhisi iyo inokutendera iwe kutamba mitambo pamaseva eGoogle kubva kumidziyo inoenderana senge mafoni, mahwendefa, makomputa edesktop, malaptop, materevhizheni, nevamwe. Google akavimbisa kuti maStadia maseva anokwanisa kuendesa 4K pane 60 mafuremu sekondi yega yekuita.
Rimwe chete zuva mushure mekutanga, vazhinji vakatopa maitiro avo echigadzirwa sezvo ivo vaikwanisa kuyedza Stadia mukutarisa isati yatanga kuburitswa zviri pamutemo.
Mazhinji ongororo anoratidza izvo Google Stadia ichiri mubeta uye kuti iyo kambani ichine basa rakawanda rekuita kana uchinyatsofunga kutsiva mutambo weconsoleti sezvakataurwa munaKurume apfuura kumusangano weGDC.
Kubva pakuzviita, Google yakaburitsa pasuru inonzi »Yekutanga Yekutsikisa» Iyo ine Chromecast Ultra uye akazvitsaurira controller, iyo inogona kubatanidza yakananga kumaseva emitambo kuburikidza neWi-Fi.
Iyo kuvhura iri nyore kwazvo kubvira iwe unongoda kumisikidza iyo Chromecast Ultra uye wozobatidza iyo kure kure kuti umugadzirise zvakare. Zvese zviri nyore kuita uye zvinongotora maminetsi mashoma. Zvinoenderana neongororo paGoogle Stadia, sevhisi iri kushanda nemazvo.
Kunyangwe Google yakaratidza izvozvo software yekuvandudza iri kuuya kune mamwe ese mafaera kuitira kuti sevhisi ikwanise kumhanya. Kunyangwe parizvino, muchikamu chemafoni, chete Google Pixel inowirirana neStadia.
Kuwedzera kune akajairwa mutambo mabhatani, hunhu hunoshamisa hwemutemo ndewekuti unosiyaniswa por que inopa kusangana kwakasimba nemamwe masevhisi eGoogle: imwe inotangisa Google Mubatsiri uye imwe iyo inogona kusetwa kuti igovere ipapo ipapo rukova rwepamoyo kuYouTube.
Zvisinei, zvinoratidzika kuti hapana chimwe chezvinhu izvi chakavimbiswa nekambani chiripo. Google yakaratidza kuti software yekuvandudza inofanirwa kuita kuti masevhisi avepo munguva pfupi iri kutevera.
Zvechokwadi, Pakutangisa, Stadia inotsigira nzira nhatu dzekutamba:
Zvakabatana panyama mutungamiriri kuPc kana Mac uye kurodha Stadia webhusaiti
Nyatsobatanidza mutungamiriri kuPixel foni uye utambe kubva kuapp
Kubatanidza zvisina waya kuChromecast uye kutamba mitambo paTV.
Parizvino Google Stadia TV interface haina kukwana uye haipe chitoro chemutambo. Sezvo parizvino mitambo makumi maviri nemaviri chete inopihwa neGoogle Stadia uye ipfupi maererano nekatalog yakadzikama mune izvo zvinoreva, nekuti muchikamu ichi haigone kana kuenzaniswa nezvitoro zveconsole.
Padanho razvino, hazvigoneke kubatanidza mutungamiriri kune imwe foni isiri Pixel, haigone kutambwa pa4G. Kuwedzera pakutenga mitambo, inofanirwa kuitwa kubva parunhare uye kunyangwe kutenderera kwemutambo parizvino kunongowanikwa paPixels, kunyangwe chero foni ichigona kuwana iyo app kuti igadzirise chimiro, isvike kuchitoro, kana kutamba mitambo paChromecast.
Nenzira iyo yakagadzirirwa, munhu wese akaziva kuti Google yawana izvo zvayakavimbisa kunyangwe izvo kune rumwe rutivi, vatsoropodzi vanofunga kuti ndiko kukurumidza kusunungurwasezvo kambani yakanyatsogadzikana mukukwanisa kwayo kusundira inotevera software yekugadzirisa, isinganzwisise kukosha kwekupa vekutanga vashandisi izvo zvakavimbiswa uye pamusoro pezvose chinhu chekuvimbika kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yekutamba yevhidhiyo chikuva, "Google Stadia" yakatotanga kuvambwa
Zviripachena Google ine yakawanda basa pamberi payo. Pfungwa iyi yakanaka kwazvo asi ivo vanofanirwa kucherechedza mativi ese kwete eeseva avo chete asi evashandisi kwainotungamirwa uye kana vaine zvivakwa zvakakwana zverudzi urwu rwekushandisa. Chinyorwa chakanaka kwazvo. Kwaziso.